Mihena i Lagos rehefa mandeha any Afrika dia mampiseho fitomboana avo roa heny
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Mihena i Lagos rehefa mandeha any Afrika dia mampiseho fitomboana avo roa heny
Famakafakana ny fahaizan'ny seza hivezivezena amin'ireo seranam-piaramanidina iraisampirenena folo voalohany atsy Afrika, novokarin'ny ForwardKeys, dia nanambara fa nahita fihenam-bidy lehibe i Lagos na teo amin'ny sehatra anatiny na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, indrindra satria ny Arik Air dia nanapaka ny 53% ny sezany mandritra ny ambin'ny taona 2017. . Mandritra ny dimy volana ho avy, Aogositra - Desambra 2017, hisy 16% ny seza fiaramanidina kely kokoa amin'ny zotra anatiny ary 9% no ho vitsy ary amin'ny làlana iraisam-pirenena mankany Lagos.
Manome hevitra momba izany angona izany i Jon Howell, talen'ny fitantanana ny AviaDev, fihaonambe momba ny fampandrosoana ny zotram-piaramanidina afrikanina, nilaza hoe: tamin'ny 2016. Vokatr'izany, Iberia sy United Airlines dia nanakana ny asany tany Nizeria, raha ny Emirates sy ireo mpitatitra vahiny hafa kosa dia nampihena ny serivisy niverin-dalana. Nijaly ihany koa ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabana Nizeriana ary noho izany io banga io dia nofenoin'ny Ethiopian Airlines mpanararaotra foana, izay nanomboka nanompo ny toerana nizeriana faha-dimy, Kaduna tamin'ny 1 Aogositra 2017 ary izy izao no mpitatitra lehibe indrindra eo amin'ny tsenan'i Nizeria.
Ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina hafa ao amin'ny folo voalohany any Afrika dia mahita fitomboana mahasalama, izay iraisampirenena kokoa noho ny ao an-toerana. Na izany aza, ny ankanavaka miavaka indrindra amin'ity fironana ity dia Nairobi, izay mahita fisondrotana 22% amin'ny fahaiza-manao ao an-trano.
Ity valim-pikarohana ity dia ao anatin'ny tatitra lehibe kokoa momba ny dia any Afrika, izay maminavina ny lamin'ny fitsangatsanganana amin'ny ho avy amin'ny famakafakana ny fifanakalozana famandrihana 17 tapitrisa isan'andro. Izy io dia mampiseho ny fitomboan'ny isa indroa amin'ny fahatongavan'ny sidina mandritra ny tapany voalohany amin'ity taona ity ary tsy manondro firy ny fiakaran'ny fitomboana tsy ho ela. Ny tatitra misimisy kokoa dia hahatonga ny famakiana am-pitokisana ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, governemanta ary mpikirakira trano fandraisam-bahiny mikasa ny hifanakalo hevitra momba ny zotram-piaramanidina vaovao azo atao ao AviaDev any Kigali amin'ny volana oktobra.
Ny tatitra dia nanambara fa tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'ny taona, 1 Jan - 31 Jolay 2017, ny totalin'ny sidina iraisam-pirenena dia nitombo 14.0% tao anatin'ny fe-potoana iray ihany tamin'ny 2016. Ny tena lehibe dia matanjaka kokoa ny fitomboana ho an'ny dia mankany amin'ny kaontinanta noho ny ao anatiny ny kaontinanta. Ny fahatongavan'ireo avy any Eropa, izay mandrafitra ny 46% amin'ny tsena, dia nahatratra 13.2%. Avy any Amerika, ny tonga dia 17.6%; avy any Moyen Orient, tafakatra 14.0% izy ireo ary avy any Azia Pasifika, tafakatra 18.4% izy ireo. Raha ampitahaina, ny fitsangatsanganana an'habakabaka afrikanina, izay mahatratra 26% ny tsena, dia 12.6%.
Raha jerena ireo firenena folo itodiana voalohany any Afrika, dia nisy ny fampisehoana niavaka avy tany Tonizia sy i Egypt, izay tafarina tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro roa taona lasa izay, tafakatra 33.5% ary 24.8%. Ankoatr'izay, i Morocco sy i Tonizia dia nahazo fampisondrotana goavana ny fahatongavan'ireo avy any Shina, izay tafakatra 450% sy 250%, taorian'ny nanalefahan'izy ireo ny fameperana visa. Ny fahadisoam-panantenana iray dia i Nizeria, izay nahitana fihenan'ny 0.8%, taorian'ny fihemorana tamin'ny 2016, vokatry ny fianjeran'ny vidin-tsolika hatramin'ny ambany 13 taona.
Manantena ny faran'ny taom-kalandrie, ny famandrihana sidina mankany Afrika dia 16.8% mialoha ny toerana nisy azy ireo tamin'ny 31 Jolay 2016. Ny famandrihana avy any Eropa dia 17.5% mialoha, avy any Amerika 26.6% mialoha, avy any Azia Pasifika 11.5 % mialoha, avy any Moyen orient 8.2% mialoha ary ny famandrihana ho an'ny dia afrikanina afrikanina dia 11.0% mialoha.
Ny fijerena manokana an'i Afrika Atsinanana dia mampiseho fironana mitovy amin'izany amin'ny fampisehoana sy ny fomba fijery hatramin'ny faran'ny taona. Na izany aza, manana famandrihana mandroso matanjaka kokoa avy any Eropa izy, 22.9% mialoha ary tsy dia matanjaka ny famandrihana avy any an-kafa; ny amerikana dia 15.5% mialoha ary ny fitsangatsanganan'ny afrikanina afrikanina 7.6% mialoha. Na izany aza, ny famandrihana avy any Moyen Orient sy Azia Pasifika dia 6.0% ary 3.8% ao aoriany.
Amin'ny sehatra seranam-piaramanidina tsirairay, ny fiakarana lehibe indrindra any Afrika Atsinanana dia ao Kigali, misy zotra vaovao mankany Bruxelles, Londres ary Mumbai. Ny fahaiza-manao vaovao manamarika dia misy Kilimanjaro mankany Dubai ary Nairobi mankany Muscat ary any Yemen.
HondaJet dia nahazo taratasy fanamarinana karazana avy amin'ny Birao Nasionaly misahana ny fiaramanidina sivily nasionaly
Ireo trano fandraisam-bahiny marika fampiononana dia manohy manjaka amin'ny sokajy misy fisokafana vaovao sy fantsona matanjaka indrindra amin'ny tantara